Usebhale incwadi owahlukunyezwa
UNKSZ Sibahle Myeza owataxwa ngabagibeli ayegibele nabo etekisini bemsola ukuthi ukhonza enkolweni kaSathane ubhale incwadi ngalesi sigameko esaholela ekutheni aphume etekisini ihamba Isithombe: Sithunyelwe
PHILI MJOLI | September 26, 2019
UBHALE incwadi owesifazane waseBluff eThekwini owataxwa kanzima ngabagibeli etekisini bemsola ngokuthi ukholwa enkolweni kaSathane ngo-2016.
UNksz Sibahle Enhle Myeza (24) owagcwala izinkundla zokuxhumana ngo-2016 emuva kokushaywa etekisini eyayiya eMthwalume, ubhale incwadi ethi Black Female War, etholakala esitolo esidayisa izincwadi i-Adams Booksellers.
Uthe awukho umnyango angazange awungene kodwa akasizakalanga. UNksz Myeza uthe emuva kokushaywa kwakhe wavula icala kodwa akukaze kuboshwe muntu.
Waya kusoseshini wamatekisi eyobika wathenjiswa ukuthi uzonxeshezelwa ngezimpahla zakhe ezalahleka, leso sithembiso uthe kasifezwanga.
Ngokuhamba kwesikhathi ebona ukuthi lesi sithembiso asifezeki waya kubameli bamahhala ukuze bamsize kuvulwe icala lamademeshe nakhona kwanhlanga zimuka nomoya.
Ngokuhamba kwesikhathi wabona ukuthi akuqhubeki lutho ngecala lakhe waya kuMvikeli woMphakathi eyokhalaza ngokunyathelwa kwelungelo lakhe kanjalo nokungaboshwa kwabamshaya kodwa nakhona uthi akuzange kwenzeke lutho.
Ngemuva kwalesi sigameko uthe walimala kanzima ekhanda ngoba waziphonsa phansi itekisi ihamba emuva kokuthi itekisi idlule naye esitobhini okwakumele ehle kuso.
Uthe ngaleso sikhathi kwase kunguyena kuphela umgibeli kule tekisi ebona sengathi uzokwenzakaliswa.
“Ngaba nenkinga yokuthi izinto eziningi angisazikhumbuli kahle, ngaqala ukubhala phansi ukulandelana kwezinto engazenza ngizama ukuthola usizo, ngithi ngenzela ukuthi uma kufika isikhathi lapho kumele ngikhulume ngakho ngingabi nankinga. Ngagcina sengifikelwa ugqozi lokubhala incwadi,” kusho uNksz Myeza.
Uthe ubone ukuthi okwenzeke kuye, nomunye umuntu wesifazane angafunda kukho.
“Sihlale sizwa kukhulunywa ngezindawo zosizo ezikhona kodwa mina angizange ngisizakale. Amaphoyisa aseHibberdene lapho ngaqala khona ngizama ukuvula icala, awangisizanga kunalokho ayengihlohla ngemibuzo ekhombisa ukuthi awayikholwa yonke lento engiyishoyo. Ngadlulela ePort Shepstone ngalivula khona icala kodwa idokodo labuyiselwa eScottburg bathatha izitatimende kimi kodwa kuze kube manje akukaze kuboshwe muntu.”
Uqhube wathi walahlekelwa yibhizinisi ayenalo ngesikhathi kuwa inkampani yakhe eyayisiza abafisa ukungena emkhakheni wonobuhle ngoba kwakumele aye ezikhungweni zezempilo athole nokwelulekwa komphefumulo.
Uthe ngale ncwadi uchaza impi esabhekene nabantu besifazane abamnyama, indlela abahlukumezeka ngayo nokuthi yini abangayenza uma behlukumezeka.
Ubuye achaze nokuthi yini ayifundile kulesi sehlo sokusokuhlukunyezwa kwakhe, izinhlobonhlobo zokuhlukunyezwa ezibhekana nabesifazane.
Uthe ukungajeziswa kwabantu abamhlukumeza akuzange kumthene mandla kodwa kumnike umfutho wokuthi asukume alwe, angagcini ngokuzilwela yena kodwa alwele nabanye besifazane.
“Igama lami langcola kuthiwa ngikhonza enkolweni kaSathane ngoba ngikhalime umuntu engambamba ehosha imali esikhwameni sami. Ngangithi ngifuna abuyise imali yami kodwa yena wathola into bonke abantu abayikholwa wathi ngikhonza enkolweni kaSathane. Ngashaywa, isithunzi sami sadicilelwa phansi.”